ardayda ahlusunna waljamaaca oo ufariistay imtixaankii finalka ahaa ee jaamacadda ahgaff ee dalka yemen | Almaschool's Blog
ardayda ahlusunna waljamaaca oo ufariistay imtixaankii finalka ahaa ee jaamacadda ahgaff ee dalka yemen
waxaa dhawaan ay ufariisteen ardayda jaamacadda ahgaff imtixaan fasaleedkii sanadkaan waxaana kamid ah ardaydaan ardayda kasocota culimada ahlusuna waljamaaca oo kawaxbarata islajaamacadda ahgaff ee kutaala dalka yemen kawaasoo kalabarta kuliyada kaladuwan .
Posted by daladda waxbarasho ee al-ma'muun on January 31, 2010 at 7:31 pm
Previous Entry: ARDAYDA AHLUSUNNA EE DALKA YEMEN
Next Entry: shiikh cumar rooble oo kamid ahaa macalimiinta iskuulka al-ma’muun oo loodoortay g.kuxigeenka. g.fulinta ahlusunna
a/s/c , salaan kabacdi aad ayaan ugu faraxsanahay webkaan, waxaan sidokale uhanbalyeynayaa gudiga sharafta leh ee isku taxlujiyay kasheekeynta madaarista waxbarashada ee ahlusunno waljamaaca , sidookale waxaan umhadcelinayaa macalimiinta iyo maamulayaasha schoolka alma,muun ee had iyo jeer utaagan in ay mugdiga kasaaraan umada somaliyeed.
Posted on February 5, 2010 at 6:03 pm
a/s/c arada al-ahqaff ee dalka yaman dhamaantiin waan idin salamaya. salaan kabacdi waxaan idiin rajeynayaa in aad imtixaanka ku guuleysataan
Posted on February 5, 2010 at 6:06 pm